Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (BCC) waa kaarka dukameysiga ee Mastercard, kaas oo ay kuu soo diraan ayna maamumlaan Ameriflex.
Kaarkaaga BCC wuxuu u shaqeeyaa sida kaarka dukaameysiga caadiga ah, marka laag reebo in:
Wax Ka Baddel Muhiim ah oo Lagu Sameeyay Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta ee Ameriflex
Ameriflex — Shirkadda bixisa Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta — ayaa kaarar cusub u diraysa adeegsadayaasha marki la gaadho Luuliyo 12. Kaarkaaga cusub wuxuu kuugu imaan doonaa baqshad aan sumad lahayn. Waa la soo furi doonaa, wuxuu diyaar u yahay in la isticmaalo, wuxuuna shaqayn doonaa 5 sano.
Markaad hesho kaarkaaga cusub:
MUHIIM AH: Haddii aad u isticmaalayso kaarkaaga BCC inaad si toos ah ugu bixiso khidmadaada bil’laha ah ee caymiska caafimaad, fadlan la xiriir shirkadaada si aad u siiso lambarka kaarkaaga cusub oo khidmadahaaga bil’laha ah loo bixiyo. Haddii aadan cusboonaysiinin lacag bixintaada tooska ah, lacag bixintaada lagama shaqayn doono waxaana lagaaga joojin karaa caymiskagaa inaadan lacagta bixinin. Tani waxay ka dhigan tahay inaad noqon karto caymis la’aan inta ka hadhay sanadka oo dhan.
Sidoo kale cusboonaysii macluumaadka kaarkaaga ee ku saabsan wax iibsi kasta oo onleen ah oo kuu qorshaysan, sida daawada dhakhtarku qoro ee farmshiga boostada wax looga iibsado.
Si badqab leh u tuur kaarkaagi hore.
Haddii aadan helin BCC cusub dhamaadka Luuliyo, waxaad ka codsan kartaa kaar cusub boggaaga Ameriflex ee onleenka ah ama inaad kala xiriirto Ameriflex lambarka 1-888-868-3539.
Maxaa na loo siinayaa kaarar cusub?
Ameriflex waxay u wareegtay shirkad kaarka samayso oo cusub oo u abuuri doona waayo-aragnimo fiican macaamiishooda. Wareegitaankan aawadiis, Ameriflex waxay qaybin doontaa oo boostada kuugu soo diri doontaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta oo cusub.
Sideen ugu xiraa lacag bixinta tooska ah kaarkayga cusub?
Hubi in lacagta caymiskaaga lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay bil kasta! La xidhiidh shirkadaada caymiska si aad u hagaajisato lacag bixin toos ah oo lagu bixiyo Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta:
Kaysar: Booqo bogga intarnetka ee Kaiser Permanente.
PacificSource: Booqo bogga intarnetka ee PacificSource.
Moda: Ka wac adeegga macaamiisha Moda 1-503-243-3962 ama bilaashka ah 1-877-605-3229, u sheeg inaad tahay shaqaale guri, oo u sheeg inaad rabto inaad dejiso lacag-bixinno toos ah oo soo noqnoqoto.
Providence: Ka wac biilasha Providence lambarka 1-503-574-5791 ama ku bixi khidamadaada bil’laha ee caymiska onleen ahaan — ee lacag bixinta khidmada ee ugu koowaad, isticmaal gujo-raacan oo dooro codsadayaasha shaqsiga iyo qoyska ee Cusub.
Regence: Adeegga Macaamiisha 1-888-675-6570 / Bogga intarnetka ee Regence / Si aad akoon u furato, tag www.regence.com/member/registration.
Khidmada ceymiska ee bil’laha ah
HAA! Kharashyada caafimaadka ee la dabaro (ilaa iyo gunnada BCC ee sanadlaha ah)
Haddii aad hesho magdhawga khidmada ceymiska ee celceliska ah
Labada xaaladoodba, waxaad wali BCC u isticmaali kartaa kharashyada jaabka laga bixiyo ee ceymiska leh. Sikastaba ha ahaatee, waa inaad si toos ah u siisaa khidmadaada shirkadaada ceymiska adiga oo isticmaalayo lacagahaada gaarka ah kadibna u gudbinaya foomka magdhawga Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha)..
Waxaa lagaa dalban karaa inaad keento cadeynta kharashyada jaabka laga bixiyo ee la dabaro, marka hubso inaad heysato dhammaan Dukumiintigaaga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) iyo rasiidhyada (gaar ahaan rasiidhyadaada qoraalka daawada, maadaama kharashyada daawada dhakhtarku qoro aysan ka muuqanin EOB-yada uu bixiyo shrikadaada ceymiska.
Shaxdan waxay muujineysaa lacagta loo heli karo gunnada BCC (annual BCC allowance) ee sanadlaha ah ee kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo ee la dabaro ilaa iyo bilowga barnaamijkan.
u eegto haraaga ku jira Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta (BCC)
FAQ (Su’aalaha Inta Badan La Isweeydiiyo) ee ku saabsan MyPlanConnect